कस्ता पुरुष सहकर्मी रुचाउँछन् महिला ? – Life Nepali
कस्ता पुरुष सहकर्मी रुचाउँछन् महिला ?
काठमाडौँ। काममा उत्प्रेरणा जगाउने, हास्यचेत भएका, नबुझेको कुरा बुझाइदिने अनि घरपरिवारकै सदस्यजस्तो व्यवहार गर्ने सहकर्मी असल लाग्छन् । मानव जीवन एक्लैले चल्दैन अथवा भनौं अघि बढ्दैन । जोकसैले आफ्नो जीवनयात्राका क्रममा अनेकौं व्यक्तिसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । जीवनका उतारचढावहरूसँगै थुप्रै उकाली ओरालीहरू पार गर्नुपर्छ । यस क्रममा मानिसहरू जीवनसाथी, सहपाठी, सहयात्री तथा सहकर्मी आदि अनेकौं भूमिकामा रहेर जीवनरथ अघि बढाउँछन् । विशेष गरी करियरका क्रममा सहकर्मीहरूसँगको साथ उल्लेख्य हुन्छ जसमा पुरुष तथा महिला दुवै सहकर्मी हुन्छन् ।
लैङ्गिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक दृष्टिले पुरुष र महिला सहकर्मीहरूबीच थुप्रै अन्तर हुन्छन् । हाम्रो समाजले अझैसम्म पनि महिला र पुरुषलाई एउटै आँखाले हेर्दैन तसर्थ कामकाजी महिलाहरूले पुरुष सहकर्मीसँगको व्यवहार, बोलीचाली एवं कामकाजका सन्दर्भमा थुप्रै किसिमका सजिला अप्ठ्यारा परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ । भनिन्छ, घरभन्दा बढी समय अफिसमा सहकर्मीसँग बिताउनुपर्छ त्यसैले सहकर्मीहरूका साथ सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ । व्यक्तिगत होस् वा व्यावसायिक, जुनसुकै सम्बन्ध स्थापित गर्न वर्षौं लाग्नसक्छ तर बिग्रन भने केही क्षण नै पर्याप्त हुन्छ ।
सम्बन्ध बिग्रिएपछि फेरि जोडिने सम्भावना त रहन्छ तर त्यसमा पहिलेजस्तो मिठास भने रहँदैन । त्यसैले सुरुदेखि नै सम्बन्धलाई सुमधुर बनाएर, भविष्यमा बिग्रन नदिने स्थिति कायम राखे व्यावसायिक क्षेत्रमा थप सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । व्यावसायिक तथा कामकाजी सम्बन्ध सदैव सन्तुलित रहनुपर्छ तर के यो सदैव सम्भव छ? सहकर्मीमध्ये कतिपयसँग सुमधुर सम्बन्ध विकसित हुन्छ भने कतिपयसँग सामान्य सम्बन्ध रहन्छ अनि कतिपयलाई हेर्नसमेत मन नलाग्ने हुनसक्छ । यी सबै कुराको निर्धारण व्यवहारबाटै हुने हो । यद्यपि राम्रो व्यवहार मात्र सहकर्मीसँगको असल सम्बन्धका लागि पर्याप्त छ ।
विशेष गरी महिलाहरू कस्ता पुरुष सहकर्मीलाई रुचाउँछन् र किन । यसमा सबैको मत एकै नहुन सक्छ । प्रभु इन्स्युरेन्समा कार्यरत स्मृति शाह सहयोगी एवं मिलनसार सहकर्मी मन पराउँछिन् । कामको प्रकृति एवं अवस्था बुझेर कसरी त्यसलाई सहज तरिकाले सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिने तथा सहकर्मीहरूलाई प्रेरणा प्रदान गर्ने पुरुष सहकर्मीका ‘का’रण कार्यालयको वातावरण सुखद् हुने उनको ठहर छ । सहकर्मीलाई उचित सम्मान प्रदान गर्ने, हँसिलो, नम्र, मुड बुझेर व्यवहार गर्नस’क्ने क्षमता भएका पुरुष सहकर्मी उनलाई विशेष मन पर्छन् ।
कामको समयमा कामसँग मात्र सम्बन्ध राख्ने तर सेन्स अफ ह्युमर भएका सहकर्मीहरू महिला वा पुरुष जो भए पनि आफूलाई मन पर्ने शाह बताउँछिन् । शाह भन्छिन् ‘काममा उत्प्रेरणा एवं व्यक्तिगत सम्मान दिने हाकिम, निश्चित दूरी राख्ने तर मिजासपूर्वक बोल्ने अनि परस्परमा प्रेम एवं सद्भाव राखेर सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने समान तहका सहकर्मी तथा प्रेम एवं सम्मानपूर्वक काम गर्न अघि सर्ने तल्ला तहका सहकर्मीहरू सबैको चाहना हुनसक्छ । मेरो रुचिभित्र पनि विशेष गरी त्यस्ता पुरुष सहकर्मी पर्छन् जो महिला सहकर्मीलाई पर्याप्त सम्मान दिन्छन् ।
Previous आफ्नै बुवाले छोरीलाई गरे पटक-पटक क*रणी, आमा छोरी रुँ*दै मिडियामा (भिडियो)
Next धादिङमा घ’ट्यो अचम्मको घ’टना : बेहुली लिन गएका ३ सय जन्ती रित्तै फ,र्किए !